Sarri oo ka jawaab celiyay codsi ka yimid taageerayaasha careysan ee kooxda Chelsea – Gool FM
(England) 01 Abriil 2019. Macalinka reer Talyaani iyo kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa u jawaab celiyay jamaahiirta Blues, oo weydiistay in laga casilo shaqada tababarka ee kooxda intii uu socday kulankii Cardiff City.
Kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea ayaa ku garaacday 2-1 Cardiff City, kadib markii ay isku wajaheen kulan ka tirsanaa kulamada 32-aad ee horyaalka Premier League.
Laakiin inta ay ciyaarta socotay tageerayaasha kooxda Chelsea ayaa waxay ugu baaqeen maamulka Blues inay shaqada ka ceyriyaan Maurizio Sarri, sababa la xiriira inay ka aaminsan yihiin inuusan ogeyn waxa uu sameenayo.
Balse kadib ciyaarta jawaab celin xoogan ayaa ka timid macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri wuxuuna yiri:
“Waxaan la qabsaday arimahan oo kale, si wanaagsan ayaan u garanayaa sida loo jawaab celiyo”.
“Waxaa laga yaabaa inay fiicnaan lahayd inay sugaan ilaa iyo dhamaadka ciyaarta, lakiin aniga ahaan arimahan oo kale ma ahan dhibaato weyn”.
Si kastaba, dhaleeceenta uu halayo tababare Maurizio Sarri, ayaa sabab u ah natoojiyanka iyo isbedelka ku yimid kooxda, iyadoo ay Chelsea haatan fadhido kaalita 6-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, taasoo aan u suuragal ka dhigi karin inay ka qeyb galaan tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Tababare Solskjær oo ka hadlay hadaladii weerarka ahaa uu kala kulmay macalinkii hore Man United ee Louis van Gaal